मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा १७.४८%ले बढ्यो - Aathikbazarnews.com मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा १७.४८%ले बढ्यो -
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा १७.४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकले गत आवको पहिलो त्रैमासमा २९ करोड ४१ लाख नाफा आर्जन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ३४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।
बैंकले यस अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ८३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ भने बैंकले यस अवघिमा ९७ अर्ब १६ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । साथै, यस अवधिमा बैंकले ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैंकको चुक्तापुँजी ४ अर्ब ८१ करोड र रिजर्भममा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चार बैंकको बैंकको नाफा कति पुग्यो?
बीमा समितिको निर्देशनमा अजोडको हकप्रद प्रस्ताव स्थगित
बोधराज देवकोटाले दिए सिटिजन्स बैंकको डेपुटी सीईओबाट राजिनामा
अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरह हुन त्यसकारणले पनि उहाँ फेरी अर्थमन्त्री बन्ने पक्का ?
महालक्ष्मी लाइफको नयाँ बोनसदर घोषणा, बीमितले न्युनतम ४० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५२ रुपैयाँसम्म पाउने